Dastabej » बाँकेमा संक्रमण घट्यो, संक्रमण चेन टुटेन,फेरि संक्रमण फैलिने चिकित्सकहरुको चिन्ता
बाँकेमा संक्रमण घट्यो, संक्रमण चेन टुटेन,फेरि संक्रमण फैलिने चिकित्सकहरुको चिन्ता – Dastabej
बाँकेमा संक्रमण घट्यो, संक्रमण चेन टुटेन,फेरि संक्रमण फैलिने चिकित्सकहरुको चिन्ता
नेपालगन्ज / कोरोनाको हटस्र्पोट बनेको बा“केमा हाल संक्रमण घटेको भन्दै निषेधाज्ञा हटाउनु पर्ने आवाज उठिरहेका बेला बिज्ञहरुले भने संक्रमण फेरि पनि नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानसक्ने चिन्ता जनाएका छन् । उनीहरुले कोरोनको संक्रमण बा“केमा घटेको देखिए पनि संक्रमणको ‘चेन बे्रक’ नतोडिएको बताएका छन् । संक्रमण दर अझै पनि २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म देखिने गरेको छ । तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले कोरोना संक्रमणको ‘चेन बे्रक’ तोडिन संक्रमण दर ५ प्रतिशतमा झर्नु पर्छ । करिव दुई महिनादेखि लगातार निषेधाज्ञा लगाईए पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । नेपालगन्ज बजार बन्द भए पनि भिडभाड उस्तै छ । गाउ“घरमा पनि निषेधाज्ञाको असर पारेको छैन । चिया पसलमा समेत भिडभाड हुने गरेको छ । ‘करिव दुई महिनाको निषेधाज्ञाले बा“केका कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भएकै हो । ८३ बाट २५ देखि ३० प्रतिशतमा झरेको छ । यो संक्रमण पनि बढी नै हो,’ भेरी अस्पताल नेपालगन्जका वरिष्ठ फिजिसीयन तथा कोरोना स्रोत व्यक्ति डा. संकेत रिसाल भन्छन्,‘निषेधाज्ञाको समयमा त यस्तो अवसथा छ । तयारी विना नै खोलीदिने हो भने संक्रमण समुदायमा फेरि पनि त्यसैगरी फैलिन सक्छ ।’ नेपालगन्ज लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिमको हबका रुपमा रहेकाले पनि भिडभाड बढी हुने गरेको हो । नेपालगन्ज नाकाबाट हजारौ नेपालीहरु भारत जाने गर्छन । चिकित्सकहरुका अनुसार कोरोना नियन्त्रणको भरपर्दो उपाय भनेकै सामाजिक दुरी कायम गर्नु हो । तर यहा“ निषेधाज्ञामा पनि सामाजिक दुरी कायम गरिएको छैन । ‘स्वास्थ्य मापदण्ड सबैले पूरा गर्ने हो भने निषेधाज्ञाको समय घट्न सक्छ । तर हामी बढी लापरवाही गरिरहेकाले निषेधाज्ञाको समय बढ्दै गएको हो,’ डा. रिसाल भन्छन्,‘सामाजिक दुरी कायम गर्नसक्ने हो भने बढी भिड हुने सार्वजनिक स्थलबाहेकका स्थान केही समयका लागि खोल्न सकिन्छ ।’ नेपालगन्जमा भने गाडी, रिक्सा खुलेआम चलेका छन् । ठाउ“ठाउ“मा पसलसमेत खोलिन थालेका छन् । जसका कारण कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने चिन्ता बढेको हो ।े पहिलो चरणमा अमेरीकाले लकडाउन नगर्दा निकै ठूलो क्षति व्यहोरेको थियो । आईतबार भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा उपचार गराई रहेका कोरोना संक्रमित मध्ये ५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
भेरी अस्पताल नेपालगन्जका कन्सलटेन्ट प्रमुख तथा फिजिसीयन डा.राजन पाण्डेले पनि बा“केमा कोरोना संक्रमण घटे पनि संक्रमण फैलिनसक्ने खतरा यथावत रहेको जनाए । उनले डब्लुएचओको गाइड लाईन अनुसार संक्रमण दर नियन्त्रणमा नआएको बताए । ‘सार्वजनिकरुपमा भिडभाड हुने स्थान, पार्क, सेनिमा हल लगायतका स्थान त खोल्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन । कम भिडभाड हुने स्थानमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर केही समयमा लागि खोल्दा हुन्छ । तर पुरै बजार खोल्ने अवस्था छैन,’ उनले भने,‘सबैभन्दा ठूलो कुरा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नु हो ।’
भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा कार्यरत चिकित्सक डा.बद्री चापागाईले डब्लुएचकोे गाईड लाईन अनुसार संक्रमित दर ५ प्रतिशतमा झार्न अझै समय लाग्ने बताए । उनले कोरोना नियन्त्रण हु“दै जाने हो भने बिस्तारै निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै लैजानु पर्ने सुझाए । ‘काम परेको मान्छे घरबाट निस्किनुस । काम नभएकाहरु घरमै बस्दा हुन्थ्यो,’ उनले भने,‘निषेधाज्ञाले सर्वसाधारणहरुको दैनिक जीवनमा निकै ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । त्यस तर्फ पनि सोच्न आवश्यक छ ।’ उनले बा“केमा उपचार गराई रहेका कोरोनाका विरामीहरु मध्ये बढीजसो बाहिर जिल्लाका छन् ।
बा“केका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले चिकित्सकहरुको परामर्श पछि निषेधाज्ञालाई एक साताका लागि निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको बताए । एक साताको निषेधाज्ञाले बा“केमा अझै पनि कोरोना संक्रमण कम हुने उनको विश्वास छ । ‘निषेधाज्ञाका समयमा अतिआवश्यक बस्तु खरिदका लागि केही खुकुलो छ,’ उनले भने । भेरी अस्पतालमा अझै पनि ७० कोरोना संक्रमित विरामीहरु उपचारकै क्रममा छन् ।
६ असार २०७८, आईतवार ११:१२ प्रकाशित